how to set up burmese font in wordpress - MYSTERY ZILLION
how to set up burmese font in wordpress
May 2008 edited July 2008 in Blog
can anyone tell me how to set up burmese font (zawgyi) in wordpress, so that i can post in burmese?
ကျွန်တော် wordpress မှာ ဇော်ဂျီဖောင့်ထည့်တာကတော့ Theme Editor ကနေ Stylesheet ( style.css ) မှာ လိုက်ထည့်တယ်ဗျ ...
Font- family တွေမှာ Zaw gyi -one လိုက်ထည့်ပါတယ် ...အဲဒါဆိုရင်တော့ မြန်မာဖောင့်ပေါ်ပါတယ် ခင်ဗျာ ...
ကျန်တဲ့ တတ်သိနားလည်တဲ့ သူများလဲ လာပြီးအကြံပေးကြပါလိမ့်မယ် ......
၁. ဇော်ဂျီ Font နှင့် ကီးဘုတ် လက်ကွက်ကို ကွန်ပြူတာမှာ Install လုပ်ရပါမယ်။
၂. Wordpress.org (သို့) Blogspot မှာ Blog ရေးမယ်ဆိုရင်၊ Template ရဲ့ CSS ထဲမှာ ရှိသမျှ
Font နေရာတွေမှာ 'Zawgyi-One' လို့ထည့်ပေးရပါမယ်။ ဒါမှသာ Web browsers တွေမှာ
?? တွေ မမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
၃. ကိုယ်ပိုင် hosting မဟုတ်ဘဲ၊ Wordpress.org, Blogspot တို့ကို သုံးတာဆိုရင်၊ Post လုပ်တဲ့အခါ
Text input box ထဲမှာ ကိုယ်ရိုက်လိုက်ရင် ?? များ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ မပူပါနဲ့။ Blog page ကို ရောက်သွားရင်
ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဘာကြောင့်ဆို၊ Blog sofware ရဲ့ CSS ကို ကိုယ်ကပြင်မရလို့ဖြစ်ပါတယ်။
အကယ်၍ကိုယ့်Hosting နဲ့ Wordpress ဆိုရင်၊ Wordpress application ရဲ့ CSS မှာ ဇော်ဂျီကို ထည့်ခြင်း
ဖြင့်Text Input box တွေမှ ?? တွေကို ပျောက်အောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
၄. Wordpress, Blogspot free service ကို သုံးပြီး။ HTML, CSS လုံး၀မသိဘူးဆိုရင်တော့
Template ထဲက Code တွေကို ဒီမှာ Post လုပ်လိုက်ပါ။ MrDBA တို့ ကိုစေတန်တို့ပြင်ပေးပါလိမ့်မယ်။
မှတ်ချက်။ Free blog software များရဲ့ input text box မှာ ?? မပေါ်အောင် FireFox နဲ့ Greasemonkey ကို
သုံးပြီး လုပ်လို့ရမယ်ထင်ပါတယ်။ စမ်းတော့ မစမ်းရသေးပါဘူး။ စမ်းပြီးရင် ပြောပြပါမည်။
one123 wrote: »
one123 ခင်ဗျာ. . .
burmese အစား Myanmar လို့သုံးပါလားဗျာ. . . ကျွန်တော်တို့က မြန်မာလူမျိုးတွေပါ . . .
ဗမာမဟုတ်ဘူး. . . .:D
ဒီလိုပြောလို့ စိတ်တော့ မဆိုးပါနဲ့ဗျာ . . . :8:
Yeman ခင်ဗျာ . . ကျွန်တော် နားလည်ထားတာကတော့ ဗမာလူမျိုး .. မြန်မာနိုင်ငံသား လို့သိထားပါတယ် ..
မြန်မာလူမျိုးမဟုတ်ပါဘူး .. ဗမာမဟုတ်ဘူး လို့မပြောပါနဲ့ဗျာ .. တနည်းအားဖြင့် ကရင်လူမျိုး .. မြန်မာနိုင်ငံသား ၊ ရှမ်းလူမျိုး .. မြန်မာနိုင်ငံသား .. အဲလို သုံးပါတယ်ခင်ဗျာ ..
one123 ခင်ဗျာ. . .burmese အစား Myanmar လို့သုံးပါလားဗျာ. . . ကျွန်တော်တို့က မြန်မာလူမျိုးတွေပါ . . .ဗမာမဟုတ်ဘူး. . . ဒီလိုပြောလို့ စိတ်တော့ မဆိုးပါနဲ့ဗျာ . . .
ကို ရဲမာန်ရဲ့စကားကို ကြိုဆိုတယ်ဗျာ..
ကို one123 မသိလို့ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်.. ယခုMyanmar ဆိုတာမသိလို့ပါ...
ဒီလိုပါပဲ ခေါ်မိခေါ်ရာ ဖြစ်တက်ပါတယ်... နားလည်းပေးပါဗျာ...
can anyone tell me how to set up burmese font (zawgyi) in wordpress, so that i can post in burmese? တစ်ခုတော့ ရှိတယ်.. zawgyi ဟာ zawgyi ပါပဲ
myanmar ဟာလည်း myanmar ပါပဲ စကားလုံးသုံးစွဲတာ မှားသွားတာပါ..နာလည်းပါတယ်..
burmese ဆိုတဲ့ စကားဟာ နှောင်းခေတ်မှာ ကျန်ခဲ့ပါပြီး ချစ်သော iceos
ဟေးဟေး ... ငါလဲပါမကွ ..။
ကိုရဲမာန် ပြောချင်တာက ကြားနေကြ မြန်မာဖောင့်ဆိုတဲ့ နေရာမှာ ဘားမိစ် ဖောင့်ဖြစ်နေလို့ မြန်မာလို့ဘဲသုံးပါလားလို့ ပြောချင်တာ ..။(အသည်းယားသွားပုံရတယ်)
လူမျိုးတွေ နိုင်ငံသားတွေပါ ပါတ်သက်လာရင်တော့ ဟဲဟဲ ကျွန်တော်တို့မှာ ဗမာလူမျိုး (ကရင်လူမျိုး၊ ရှမ်းလူမျိုး).. မြန်မာ နိုင်ငံသား လို့သာ သုံးစွဲနေကြကြောင်းပါ။(မန်းလေးသားနော် အမှတ်မမှားနဲ့ ...)
ခက်တာက ယင်းဂလိပ်လိုပြောကြရင်တော့ .. တရုပ်စကားကို (Chinese)၊ ဂျပန်စကားကို (Japanese)၊ မြန်မာ(ဗမာ)စကား ကိုတော့ (Burmese) လို့ သုံးနေကြကြောင်းပါ၊ ဘာလို့ Myanmese လို့မသုံးလဲသိဘူး။
တော်တော်များများ နိုင်ငံခြားသားများက Burma ဆိုရင် Myanmar ထက်ပိုသိကြတယ်ဗျ။ အဲဒီကနေဆင်းသက်လာတဲ့ ဂျပန်လိုဆိုရင် (ဘိရုမာ = ဗမာ) လို့ခေါ်ကြတာပေါ့။ မဟုတ်ရင် ဂျပန်တွေလဲ လိုက်ပြောင်းရလောက်တယ် (မိရုမာ လို့ .. ဟိဟိ .. နော့ ကိုမာ့ခ်)
ဒီလောက်ပါဘဲ ... :103: